अन्ततः फागुन १७ को लगन:: Mero Desh
अन्ततः फागुन १७ को लगन
Published on: २९ माघ २०७६, बुधबार ०९:२१
दुई पटकसम्म इन्गेजमेन्ट भएर विवाहको लगन नजुरे भनेर अब अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मानदेशराज जोशीले खप्की खाइरहनु परेन। अन्ततः उनीहरुको विवाहको साइत जुरेको छ। उनीहरुको विवाह अगामी फागुन १७ गते गर्ने मिति तय भएको छ। केही दिनअघि कुनै रक्सी कम्पनीले प्रायोजन
गरिदिएको ब्याचलर पार्टीमा सहभागिता जनाएको तस्बिरहरु इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक भएलगत्तै उनको बिहेको पक्कापक्की भएको खुलासा भएको थियो।
प्रियंकाले धेरैको अनुमानविपरीत आयुष्मानसँगै बिहे गर्ने पक्का भएको हो। खासमा यी दुईको सम्बन्ध त्यति लामो नटिक्ने अनुमान गरिरहेका थिए। कारण थियो, प्रियंकाले पहिल्यै खाएको धोका र आयुष्मान तथा पारमिता राणाबीचको सम्बन्ध।तर ठक्करबाटै धेरै कुरा सिकिन्छ र समयसँगै परिपक्व बन्छ सम्बन्ध भनेजस्तै यी दुईको अन्ततः बिहेको मिति नै जुरिसकेछ। खैर, हाम्रो आशीर्वाद र शुभकामना छ, यो लभ बर्डको सम्बन्ध आयुभन्दा चिरायु रहोस् ! चियर्स !!
गीतकै अर्थ नजान्ने ?
गत सोमबार ‘चपली हाइट ३’को गीत रिलिजको लागि दरबारमार्गमा प्रेस मिट गरिएको थियो। कार्यक्रममा अभिनेत्री सुपुष्पा भट्ट लगायतलाई अन्यलाई पत्रकारहरुले ‘चार आनाको मसलामा’ गीतमा चार आना भनेको कति हो भनी सोधे।
उक्त प्रश्नको जवाफ नै उनले फर्काउन सकिनन्। कतिको हो कति भनेर उनी अकमक्क परिन्। उनीबाट जवाफ नआएपछि छेउैमै रहेका निर्माता अर्जुन कुमारले उनको हातबाट माइक खोसेर चारआनाको बेलिबिस्तार लगाए। चार आना भनेको पच्चिस पैसा हो भन्दै सुपुष्पालाई सिकाए।
सुपुष्पालाई ठूला प्रश्नको जवाफ आउँथ्यो होला, यस्ता झिनामसिना प्रश्नको उत्तर नआएर अनुहार नै रातोपीरो भयो।
त्यै भएर नयाँ शब्द, नयाँ कुरा थाहा पाउनेबित्तिकै त्यसको अर्थ के रहेछ भनेर चासो दिने बानी बसाल्नु सधैँ राम्रो हुन्छ क्या !